Layma's World: ပျောက်တယ်….ပြင်တယ်…..ကောင်းသွားတယ်…
ကမ္ဘာအတုမှ ခဏ ပျောက်သွားခြင်း…
ဒီရက်ပိုင်းမှာ……“လေးမ” ပျောက်နေတာကို … တချို့ သူငယ်ချင်းတွေ … သတိပြု မိပါလိမ့်မယ်…။ ခင်မင်တဲ့သူ တချို့ ကလဲ “လေးမ” တစ်ယောက် မပုံရိပ်လို မလုပ်မဖြစ်တာလေးတွေလုပ်ဖို့…မဂျစ်စကားနားထောင်ပြီး…မပန်ကို အတုခိုးပြီး ဗကေးရှင်း ယူသွားတယ်လို့ … တွေးကောင်းတွေးပါလိမ့်မယ်…။ အဲဒီလိုများ…သတိရနေမယ့်သူ တစ်ယောက်လောက် ရှိရင်ဖြင့်….သိပ်ပျော်စရာကောင်းမှာပဲ….လို့ မတွေးတော့ပါဘူး…. မပန်ပြောသလို … မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ အညီ ….Blog မှာ နေထိုင်ရမယ်…။
“လေးမ” ပျောက်နေတာ… အိပ်ရာထဲ ဗုန်းဗုန်းလဲ သွားလို့ ပါ…။ ဟိုနေ့ က…. ဒီဇယ်ဈေး ၂ ဆ တက်သွားတော့ …. အိမ်က ကား ၈ စီးအတွက် ဆီဖိုးကို နင့်ခနဲ ….. တခါတည်းထုတ်ပေးရတဲ့ အချိန်မှာ … အင့် …. ခနဲဖြစ်ပြီး… ပုံရက်သား လဲကျသွားလို့ ပါ ရှင်…။ လမ်းထိပ်မှာ ပဲပြုတ်သွား
၀ယ်ဖို့BMW လေးတစ်စီး နဲ့ …. မျက်စောင်းထိုးက အိမ်မှာ အတင်းသွားအုပ်ရင် စီးဖို့…. မာစီးဒီးလေး တစ်စီး လောက် … ၀ယ်ဦးမယ်လို့ …. စဉ်းစားထားတဲ့ စိတ်ကူးလေးကိုတောင် …. ဆိုင်းငံ့ list ထဲ…. ထည့်လိုက်ရတယ်…..။ “လေးမ” နေမကောင်းတာလေ….ထမင်းတောင် မစားနိုင်ဘူး…. ၅၀၀ တန် ပန်းသီး ၁၀ လုံးကို…. မစားချင်စားချင်နဲ့ …. မ၀င်ဝင်အောင် စားရတယ်….။ အိပ်ရာပေါ်ကလဲ မထနိုင်ဘူး…. တနေကုန် အိပ်ရာထဲမှာပဲ လှဲနေရတယ်…။ မြန်မာကား….. တရုတ်ကား…. အင်္ဂလိပ်ကား… ကိုရီးယားကား…..ကုလားကားတွေကို… မြန်မာ စာတမ်းထိုးနဲ့ဆက်တိုက်လွှင့်ပေးနေတဲ့5movies ကို ကြည့်ရင်း….အိပ်ရာထဲမှာလှဲနေရတယ်…..။ သူများအဆင်သင့် ဘာသာပြန်ပေးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို တုံးလာပြီလား
လို့ … သံသယ၀င်မိပေမယ့် … ဘာသာပြန်စာသားနဲ့စကားပြော တွဲသင်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့ လို့ လဲ ဆင်ခြေပေးမိပြန်တယ်…..။
“လေးမ” နေမကောင်းတာ ပြင်းထန်လွန်းလို့connection လေးတောင် ဓါတ်ကူးပြီး နေမကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်….။ အရင်လိုပဲ … တနေ့ ကောင်းနိုး ကောင်းနိုးနဲ့ … စောင့်နေရာက … မနေနိူင်တဲ့ အဆုံးမှာ…. ပညာရှင်ကို ပင့်ပြီး…စစ်ခိုင်းလိုက်တော့…. မိုးရွာလို့ … routerထဲက… data တွေ… ပြောင်းကုန်တာဆိုလား….ဘာလား…. တောက်တောက်တက်တက်နဲ့ပညာရှင်က နှိပ်လိုက်တော့ … ကောင်းသွားရော….။ “လေးမ” လဲ နောက်တခါဖြစ်ရင် … ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြင်လို့ ရအောင် … နားလည်အောင် လိုက်ကြည့်ပေမယ့် … ပညာပါရမီ ဓါတ်ခံက နဲတော့ … ဘာတွေ လုပ်လိုက်မှန်းကို မသိလိုက်ရပါဘူးရှင်….။ စောစောစီးစီး ခေါ်စစ်ခိုင်းမိရင် ၃ ရက်လောက် နေမထိထိုင်မသာ ကြိတ်မှိတ်သည်းခံပြီး အိပ်နေရတဲ့ … ဝေဒနာကို … ကြာကြာခံစားရမှာ မဟုတ်ဘူး….။
အခုတော့လဲ အားလုံးကောင်းသွားပါပြီ…..။ စက်ကလဲ…. ပြင်လိုက်လို့ကောင်းသွားတယ်….…. လူကလဲ စိတ်ကိုပြင်လိုက်လို့ ….ကောင်းသွားတယ်….။
ဒါဟာ စိတ်ညစ်စရာမှ မဟုတ်ဘဲ….. ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ…… ဒီလိုပဲ အချို့ သော
အရာတွေကို လိုချင်လို့ မဟုတ်ဘဲ….ရခဲ့တယ်…..နှစ်သက်လို့မဟုတ်ဘဲ လက်ခံခဲ့ရတယ်…..ကျေနပ်လို့မဟုတ်ဘဲ ခေါင်းညိတ်ခဲ့ရတယ်….. မထူးဆန်းပါဘူး….. ဒါဟာ လူ့ ဘ၀ပါပဲ…..။ လူ့ လောကရဲ့ အလေ့အထကို စောဒကတက်နေရင် ကိုယ်ပဲ ဒုက္ခရောက်မယ်လေ…. ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းချည်းပဲလို့ တွေး…. စိတ်ကိုမျှတအောင်ထား…… သင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာနှလုံးသွင်း……။ ဘ၀ နဲ့ဆန္ဒထပ်တူကျဖို့ ထက် ဘ၀နဲ့ဆန္ဒ အပေးအယူမျှဖို့ က ပိုအရေးကြီးတယ်….. မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး … အားလျှော့ဖို့ …. လက်လျှော့ဖို့ တော့ မဟုတ်ဘူး…… မဖြစ်နိုင်တာကြီးကို ခါးသီးရင်း … တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေ … အလဟသ ဖြစ်မှာစိုးတာ……။ လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်……. အများကြီး လုပ်ချင်သေးတယ် ….. အများကြီး လုပ်ရဦးမယ်…..။ ။
Posted by Layma at 5:50 PM
လုပ်စရာတွေ တပွေ့ တပိုက်နဲ့ လေးမကို ကြိုဆိုလျက်ပဲး)
လူများနေမကောင်းတာလားလို့.. လက်စသတ်တော့ ဂလိုကိုး.. အနော့်ကိုလည်း ကား ၂စီးလောက် တလက်စထဲ ၀ယ်ပေးလေနော်..
မဂျစ်…. ဘာနဲ့ ကြိုမှာလဲ….ပန်းစည်းနဲ့ လား…။
ကိုသန့် ….. ဂလိုပဲဟေ့… ကား ၂ စီးလား …. အင်း ၀ယ်ပေးမယ်…. ဘေးအိမ်မှာ ဂေါ်လီ သွားရိုက်ရင်စီးဖို့ လား….။
“အပယ်ရတနာ” ၏ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံချက်…
“လေးမ” … ရှင်းလင်းပွဲ (ဒု)
ညစ် ရင် … လေ ရင် … ဓါတ်ကျရင် …
ဘက်မလိုက် အရောင် (Neutral color )
အကြိုက်ဆုံး အဟောင်း ၅ ….
ဒီအကောင် နဲ့ဒီအရောင်….တဲ့
သနပ်ခါးပန်းပြောတဲ့ “ သနပ်ခါးပန်း”